तरकारीको भाउ व्यापारीको कब्जामा, सरकार बन्यो दर्शक ! | Capital Khabar ::
गृह कृषि तरकारीको भाउ व्यापारीको कब्जामा, सरकार बन्यो दर्शक !
तरकारीको भाउ व्यापारीको कब्जामा, सरकार बन्यो दर्शक !
काठमाडौँ, कार्तिक २९- किसानले उब्जाउ गरेको तरकारीको भाउ थोक व्यापारीको नियन्त्रणमा पुगेको छ । जसकारण अहिले तरकारीको भाउ अकासिँदा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ । औसतमा दुई महिना लगाएर तरकारी उत्पादन गर्ने किसान न्यून मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य छन् ।
अघिल्लो लेखमाप्रचण्ड प्रतिबद्धतापत्र; नारायणीमा ३ वटा पुल, मनो रेल, निकुञ्जमा सुरुङ मार्ग, ५० हजारलाई रोजगारी
अर्को लेखमाअझै पुगेन चुनाव खर्च: आयोगले माग्यो दुई अर्ब